Best Nostalgic Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro - China 10TURNTABLES
Belt -tyaira Turntables
Portable sutukezi Turntables
> Best Nostalgic Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro
Best Nostalgic Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro
Nostalgic Turntables Specification Kuenzanisa
Brand Name Turntable nokukurumidza ndiro CD Player AM / karedhiyo Buttons
Electrohome Wellington Record Player (EANOS502) Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Electrohome Signature Vinyl Record Player Classic Turntable (EANOS700) Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Vicrola Nostalgic Classic Wood 6-mu-1 Makaralı Turntable Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Crosley CR704C-PA Musician Turntable Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Vicrola Nostalgic Aviator Wood 7-mu-1 Makaralı Turntable Entertainment Center, Mahogany Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Grace Digital GDI-TW3USB 7-mu-1 redhiyo Entertainment Center, Paprika Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
JPyle PTCD54UB Makaralı Vintage Classic Style Turntable Nomukurukuri System Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Sylvania SRCD838 Nostalgic Turntable Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Pyle Vintage Vinyl Turntable redhiyo System (PTCD64UBT)	 Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Pyle Vintage Vinyl Turntable redhiyo System (PTCD64UBT) Anotamba 3 havukavu chikweshe √ √ Check Price
Recently Review nokuti Turntable
Best Belt Drive Turntables 2017-mutengi kuti gwaro
Best Hi-Fi Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro
Best Portable sutukezi Turntables 2017-mutengi kuti gwaro
01 • Electrohome Wellington Record Player (EANOS502)
View musi Amazon
Construction Material: MDF (svikiro arambe achirema fiberboard)
Auto Return: Hongu
Record aimhanya: 33, 45, 78
Mutauriri Size: 2x 5W (3 ") 8 Ohms
Frequency Range (AM): 530-1710 kHz
Frequency Range (FM): 88-108 mHz
Power kunwa: 19 watts or
Size (W X D X H): 19.29 "X 12.6" X 9.1 "
Certifications: FCC, ICES, ETL / CETL
The Electrohome Wellington Record Player chinhu zvechokwadi 4 muna 1 Retro turntable unokubvumira kuteerera kwako nguva dzose vaaida. Its wabwinyiswa pamwe mahogany matanda analoginen ekuteerera hurongwa akanga inpired ne anopfuura 100 makore okukura. Ichi chinyorwa mutambi chinosanganisira anoverengeka modes akafanana AM / FM redhiyo, CD uye kuti kosi raive nebutiro mutambi. modes zvose izvi zvinodzorwa nevanhu Illuminated Tuning raundi. Kutaura zvazviri, uchikwanisa kubatanidza foni yako uye kutamba mimhanzi kana vinyls usipo; zvino haazi chete kunoshamisa?
Sezvo rekodhi mutambi ari akanyudzwa mahogany huni Anopfumisa ruzha yepamusoro uye inopa iwe pamwe Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri inzwi waivako unogona kuwana. Kana uchida private yokuteerera, pane chengarava iyo unokubvumira chivhariso mu pamahedhifoni dzenyu. Zvisinei yayo kwete pehuni anotamba rakakura basa asi tsono kushandiswa zvakanaka, ndiko nesafiri miromo yesimbi zvedongo tsono runogonesa kuti okuteerera unhu kupfuura noushamwari uye dzinongoitika vibe.
Imwe yenzira dzakanakisisa chikamu ichi chinyorwa mutambi ndechokuti unogona kunyora chaizvo pachako vinyls dzenyu kuti foni yako kubudikidza USB chengarava riri mutambi pacharo. No kombiyuta zvinodiwa, chete chivhariso mu USB yako uye chinyorwa. Zviri kusimba nyore uye mushandisi noushamwari. Akatemerwa mutengo panguva chete $ 149,99, zviri zvachose munhu akaba. Zvinonyatsorehwa ari Wellington Record mutambi ari zvinoshamisa.
1 gore garandi.
Kukwanisa kunyora imwe Album kubva USB chengarava pasina unobatanidza kuti kombiyuta.
Pose munhu raive nebutiro itsva iri kuridzwa, dzimwe skips zvinogona kunzwika.
02 • Electrohome Signature Vinyl Record Player Classic Turntable (EANOS700)
Pedza: Real Wood ukanyatsotarisisa
Record Player: Hongu
Kunyora Auto Return Arm: Hongu
USB Playback: Hongu
USB Kurekodha: Hongu
3.5mm Upiyona Inzwa Zvinotaurwa: Hongu
Mutauriri Size: 2x 5W 8 Ohms (2.6 ") 2x15W 8 Ohms (3.6")
Power Adapter Inzwa Zvinotaurwa: 120V - 60 Hz
Power Adapter Output: 11V 1,100mA
Power kunwa: 50 Watts
Size (W X D X H): 17,9 "X 13.5" X 12.1 "
Weight: 26,01 LBS
Kutsvaga chaiwo Style turntable pamwe zvishoma Kumubata yazvino? Tarira mberi sezvo iyi muenzaniso kwamuri. turntable Izvi kubva rwokuzvarwa huni uye ari HI-FI redhiyo hurongwa pamwe AM / FM, CD, USB uye MP3. Vinyl-to-MP3 kurekodha uye aux mazano nokuda smartphones uye mahwendefa, ichi zvechokwadi ndiyo rounder zvose turntable.
Electrohome ari kambani yave kuita makaseti zvigadzirwa kwemakore anopfuura 100.. Ivo makasimba Ontario uye vakanga kamwe kunzi "umambo Radio". Nokuti mutengo $ 199,95, hwakagadzira pakuvara Makaralı nokuda Wireless mumhanzi kumhanyira uye anoshanda zvose gunsteling Makaralı mano (smartphones, mapiritsi, Laptops, makombiyuta, etc). The Vinyl kuti MP3 kurekodha unokubvumira mufunge raive nebutiro zvinyorwa kupinda digitaalinen okuteerera nomukombiyuta Headphone Jack chiyamuro. Rine dhayira kuratidza kuti AM / FM zvenhepfenyuro uyewo uye azere Range redhiyo vakurukuri. Zvose zvinhu zvaunofanira vari kugara mukati muenzaniso uyu.
Uine zvikuru dzakanaka mazambiringa design, izvozvo rinonyatsotaura akuyeudzirei yesteryears ako. Kupa kubva nostalgic vibe, mungadai kufunga uri shure muna 60s. Chii Chiri kwete kuda pamusoro turntable ichi? Mumwe kufungisisa kuwana turntable ichi kana bhajeti yenyu iri mukati $ 100- $ 200.
Records mumhanzi nyore.
Akakodzera vinyls zvose.
Speed ​​hahugari refu.
03 • Vicrola Nostalgic Classic Wood 6-mu-1 Makaralı Turntable
Mabasa: CD Player, Cassette Player Yakavakirwa-In Speakers
Output Type: mutauri
Zvinosanganisira: AC Power Adapter
X 18 nemainji W
Weight: 14.9 pondo
Garandi Description: 1 Year Limited Manufacturer Warranty
Battery: hapana bhatiri kushandiswa
Store Item Number (DPCI): 008-03-0400
Wakambofunga uchida kuva zvechokwadi yekare mazambiringa kutarira turntable player vibe kumba kwako? Eya muenzaniso uyu ane zvose. Amazing nostalgic mazambiringa vanotarisa pamwe inzwi naka hwakachena. A muenzaniso nokuda Innovative Technology, ichi-nokukurumidza matatu turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) anotamba zvose gunsteling raive nebutiro marekodhi Albums.
Akatemerwa mutengo panguva chete $ 79,99, iyo musoro akatemerwa mutengo, zvinouya chete yakavakwa-muna Makaralı kutamba mumhanzi wenyu MAKARALI USB kwakagonesa akaipa wirelessly; hapana namabote kudiwa. All zvivanakire wako, iri turntable chaizvoizvo zvakanaka. Zvinoitawo akavaka-muna CD Player, Cassette Player uye FM Radio. A waya kunobatanidzwa kuti 3.5mm aux mu Jack kuti chero vasiri Makaralı namano. Chii zvakawanda unogona kukumbira? Rinewo ane rca aux-uye Headphone Jack.
The kutengesa pfungwa nokuda womuenzaniso ichi ndechokuti kwayo Makaralı kugona riri zvinoshamisa pamwe mutengo wayo. Coated muna shava, kwaizova deco wakakwana nokuda mhenyu horo yako pamwe chete nokuva naka turntable. Ungave rova ​​shiri mbiri nedombo rimwe. Chii chakasiyana nokuti mutengo ndivo pakuvara redhiyo vakurukuri.
Zvikuru kurebesa akatemerwa mutengo.
It skips zvishoma kana toreva zvinyorwa zvitsva.
04 • Crosley CR704C-PA Musician Turntable
Mabasa: CD Player, Cassette Player
Power Source: Plug-mu Magetsi Powered
Zvinosanganisira: / b> AC Power Adapter, User Manual
x 17 nemainji W
Weight: 17 pondo
Pakutanga kubva Kentucky USA, Crosley ndiro tsime yakasimbiswa muchiso kuti audiophiles vachitsvaka kutenga imwe kundopinda pamwero turntable. Kana iwe uri munhu bhajeti asi uchida kuva muenzaniso wakanaka quality, muenzaniso uyu ndiyo imwe yakadereresa akatemerwa mutengo mazambiringa turntable mumusika. Kunyange zvazvo muenzaniso uyu vangatarira chaizvoizvo mazambiringa, mabikirwo haasi.
At $ 104,99, uchazonakidzwa kuwana maoko enyu pamusoro muenzaniso uyu. Uyu bhandi nemhepo turntable kuti anotamba 3 aimhanya (33 1/3, 45, uye 78 RPM). Zviri zvakare CD mutambi iyo ine programmable 20-njanji kuyeuka uye anouya pamwe divi-sezvibwe kukaseti achipfeka. Simply chivhariso ako smartphone kana MP3 mutambi sezvazvakafanira inotakurika zvakarekodhwa yakagadzirwa. Ndiyo AM / karedhiyo kunouya ndege Tuning raundi uyewo. Kusvikira kumusoro kana kure, ane simba rizere-siyana redhiyo vakurukuri.
Magadzirirwo zvinoshamisa uye zvinenge zvakazara mu shava. The chete Zvakashatira muenzaniso uyu kuti haina kuva Headphone Jack. Asi zviri zvimwe zvinhu uye kurira unhu inoumba nokuti. Yose zvayo, ichi ndicho tarenda turntable uye kana zviri mukati bhajeti yenyu, usafunga kaviri.
05 • Vicrola Nostalgic Aviator Wood 7-mu-1 Makaralı Turntable Entertainment Center, Mahogany
Mabasa: yavakwa-In Vakurukuri, CD Player, CD wezvaiitika, AM / FM Radio
Output Type: Mutauriri, 3.5mm Jack
Zvinosanganisira: Remote Control, AC Power Adapter
X 21 nemainji W
Weight: 25.2 pondo
Akatemerwa mutengo pana $ 154,99, ichi ndicho chimwe muenzaniso zvikuru Innovative Technology. Hazvina chete kuva Pricing kukuru asi ndeimwe muenzaniso zvinoshamisa. Ndiyo patani rinopa kure yakanaka here zvechokwadi Retro vibe uye zvinenge zvakazara mu shava. Kana uri mu mazambiringa zvinhu, izvi zvingaita abate mufunge.
Uyu matatu nokukurumidza turntable (33 1/3, 45, 78 RPM) kuti anotamba zvose gunsteling raive nebutiro marekodhi Albums. Best chikamu, ayo chaiye huni kuvakwa zvavo zvawanda. It riine Makaralı kuti wirelessly kutamba mumhanzi wako Makaralı kwakagonesa mano pasina tambo inodiwa. Uyewo, records nyore zvose gunsteling mumhanzi kubva vinyls uye makaseti directy kuti CD; hapana kombiyuta inodiwa.
Ichi chinhu zvose woita turntable sezvo anewo pakuvara CD mutambi, kukaseti mutambi uye AM / karedhiyo pamwe yekare zvechinyakare muhombe tuner uye inosanganisira zvizere dzichipfekeka kure kuzvidzora uye redhiyo vakurukuri; zvinoshamisa handizvo? A waya kunobatanidzwa nokuda aux mazano chipi asiri MAKARALI USB mudziyo uye II ine rca aux-uye Headphone Jack pamwe. In mhedziso, ichi chinofanira wakanyorwa shortlist renyu yaro kunorumbidzwa ongororo.
Makaralı chinobatanidza zvechokwadi kutsanya.
Great tsindirana ezvinhu ane nostalgic Kutarira.
CD basa anofanira kunatsiridzwa.
06 • Grace Digital GDI-TW3USB 7-mu-1 redhiyo Entertainment Center, Paprika
Magadzirirwo Environmental Zviri Other zvinhu:
CD uye Music Players: Hongu
CD Kurekodha: Hongu
Redhiyo Channels: 2.0
Zvishandiswezve Packaging: Hongu
RoHS ateerere: No
Mhando Packaging: Retail Box
Garandi: 90 zuva, Retail pasuru kukura: Height: 24 ", Length: 17", Width: 16 ", Weight: 27 LBS,
Grace Digital chinhu Audio kambani iri vachishandisa San Diego, USA. A tsime yakasimbiswa Audio kambani asi zvakanaka airemekedzwa. Kana uri kushamisika kuti zvikuru mutengo womuenzaniso uyu, ichi mazambiringa rekodhi mutambi ari akatemerwa mutengo pa $ 143,73.
Ichi Retro turntable anouya aine zvinyorwa mutambi, kukaseti mutambi, CD mutambi uye AM / FM redhiyo; Eenhede kuti ekuteerera wako zvose zvinodiwa. Achitaura kwayo kumhanya, izvozvo anoridza 33, 45 uye 78 RPM zvinyorwa uye ane zvaitika inzwi ruoko. Chii chaizvo zvinoshamisa ndechokuti ine mbiri renguva zvenguva vakurukuri kuti anosvitsa nemasango redhiyo ruzha chete yakavakwa Headphone Jack avo kuti anoda private uchiteerera. An rca mutsetse goho inowanika somushonga uyewo. Pakunyora kuti PC yako kana Mac zviri nyore kushandisa uyewo yakavakwa USB pachiteshi uye Audacity Sound Editer Software kuti iripowo.
Achitaura magadzirirwo ayo, chinhu chili matanda Style cabinet kupa wekare mazambiringa aone. Kana uri uchizvibvunza kana uchifanira kuwana muenzaniso ichi, iwe haufaniri kubvunza chero mberi. Zviri mushandisi-ushamwari nayo Zvinoshamisa! It anopisa Disc nokururamisira anokurumidza uyewo. Yose zvayo, muenzaniso uyu pamusoro notch uye zvinofanira kuva chikamu yenyu chido mazita.
User noushamwari chirongwa uye anopisira ane Disc nokururamisira nokukurumidza.
Skips zvishoma kana totaura raive nebutiro itsva.
07 • Pyle PTCD54UB Makaralı Vintage Classic Style Turntable Nomukurukuri System
Unit Dimensions: 20,08 "X 13,39" X 8,86 "
Color: shava huni (Maple Explosão)
An muenzaniso zvinoshamisa nokuda Pyle, ichi chinhu chaiwo Style turntable ndicho 6-mu-1. Kunyange zvazvo zviri chinhu chinoshamisira, zviri zvikuru-chinja uye anoita basa. Zviri mazambiringa turntable kuti achakupai ano yokuteerera zvakaitika.
It ane kunoshamisa yazvino kuti unouya pakuvara Makaralı nokuda Wireless Music Streaming. Best chikamu, zvinoshanda pamwe zvose zvako pachako Makaralı mano zvakadai iPhones, Android, Smartphones, iPad, Tablets, etc. muenzaniso uyu ane pakuvara CD mutambi, Slot-mu kukaseti uriri, azere siyana redhiyo vakurukuri uye AM / FM redhiyo pamwe raundi vanoratidza kuti abate mufunge. Nokuti Vinyl kuti MP3 zvakarekodhwa, unogona mutendeuke zvinyorwa vako digitaalinen okuteerera pamwe Headphone Jack chiyamuro. Nokuti MP3 playback, pane USB Flash Drive Reader. Yakakunakira handizvo?
Nokuti Magadzirirwo, ine yemapuranga cabinet uye zvinopa kure chazvokwadi nostalgic kunzwa. Coated mune shava pamwe zvishoma kubata yendarama, muenzaniso uyu akasungwa kutarisa zvakanaka mumba menyu. Mifananidzo yaro pamusoro yemapuranga mhosva yayo wechipiri hapana. Best chikamu? Hazvina mutengo. muenzaniso iyi akatemerwa mutengo pa $ 129,99.
shava huni (Maple Explosão)
Kugona kukopa kubva raive nebutiro chinyorwa pamakombiyuta kubudisa maCD.
Kukwanisa kubatanidza kuti smartphones.
Makaralı Hurongwa anofanira kunatsiridzwa.
08 • Sylvania SRCD838 Nostalgic Turntable
Features: yavakwa-In Vakurukuri, Line-muna Jack, AM / FM Radio, CD sahwira
Weight: 17,45 pondo
Upamhi: 15,0 mu
Urefu: 11.5 mu
Depth: 11,0 mu
muenzaniso uyu Sylvania zviri anokosha zvichienzaniswa nevamwe. Kana uri kutsvaka turntable kuti akatemerwa mutengo pasi chaizvo asi ane zvakawanda kushanda, ichi ndicho turntable kwamuri.
muenzaniso ichi Sylvania ndiro 5-mu-1 turntable pamwe yepamusoro vakurukuri kuti abate mufunge. Akatemerwa mutengo panguva chete $ 64,62, uchazonakidzwa kuridza zvose chaunofarira records, maCD, tepi makaseti uye pamusoro mhepo redhiyo. Rinewo ane aux-chiyamuro kubatanidza kuti ekuteerera mudziyo upi. It ane kwezvokufuka nostalgic huni kupera iri nemasango uye oversized chaiwo raundi kuti zviri dzakanaka.
Kunyange zvazvo skips zvishoma kana toreva vinyls itsva, zvinoshanda zvinoshamisa uye ine mutengo mukuru. Inotarisira zvinoshamisa uye chaizvoizvo chinokosha dzepepuru unhani. Izvi zvinofanira kuva pamusoro Wishlist yako kana bhajeti yenyu iri pazasi $ 100.
Skips zvishoma kana toreva vinyls itsva.
09 • Pyle Vintage Vinyl Turntable redhiyo System (PTCD64UBT)
Turntable Speed MUMUSANGANO: 33-1 / 3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Dimensions: 19.4 X 13.2 X 9.2 nemainji
Garandi: 1 gore Manufacturer
Model Number: PTCD64UBT
Chimwe muenzaniso kubva Pyle, ichi chinhu turntable redhiyo hurongwa ndicho MAKARALI USB inowirirana CD, USB, SD Card Player pamwe USB wezvaiitika zvose nokuda kwomutengo $ 149,99. Kana uine bhajeti, unofanira kuwana muenzaniso uyu ari kurova kwehana.
Yechitema muna shava, manyorerwo ichi zimbabwe turntable ane zvemichina kukuru ano uye anoshanda zvose MAKARALI USB rako pachako namano. Vinyl kuti MP3 kurekodha zvinogonawo kuitwa. Inouya zvizere Range redhiyo vakurukuri kuzochera kuteerera kwako uye AM / FM redhiyo pamwe raundi kuratidza. An aux chiyamuro runogonawo kuoneka pakupedzisira remadziro. Chii chaizvo zvinoshamisa pamusoro muenzaniso uyu kuti Makaralı chemuTestamente sezvo richibatanidza chaizvo zvakanaka.
muenzaniso uyu anosanganisa munhu chaiwo nokutamba nepeni pamwe yazvino zvose mune imwe. Ndicho yemapuranga cabinet okugadziridza kunoshamisa uye ane mifananidzo chinoshamisa pamusoro payo. Akakodzera zvose hofisi kana musha, zvechokwadi haisi chikonzero kuti muenzaniso uyu kana uine bhajeti. Yose zvayo, muenzaniso uyu hakuna kuipa kunze nokuti kuti mutengo.
It ane akanaka Kutarira.
Makaralı chinobatanidza chaizvo zvakanaka.
Best Portable sutukezi Turntables 2017-Bu ...
"Sutu pachako kuti uri yeWekumusoro kukosha, sewe sarudza wokugara naye mhosva."
Kana uchida kutenga turntables kana Retro zvinhu, regai kutadza zvinhu wongororo mu turntable.com. Zvinobatsira zvikuru.
Latest dzakakurumbira Blog
Whatsapp: Fusce, ac